को हुन् किरणकुमार भुजेल ?: गाउँमा भैंसी चराउन जाँदा होस् या धान रोप्न खेत पस्दा होस् उनले गीत गाउने «
को हुन् किरणकुमार भुजेल ?: गाउँमा भैंसी चराउन जाँदा होस् या धान रोप्न खेत पस्दा होस् उनले गीत गाउने
Published : 28 August, 2020 3:09 pm
उनीभित्रको गायन क्षमताले उडानको सपना देखिरहेको थियो । उनी संगीत सिक्न काठमाडौंको ललितकलामा भर्ना भए । अनि मात्रै सुरु भयो उनको सांगीतिक संघर्ष । उनका जिवनमा आएका धेरै बाध्यातालाई पछाडी छाडेर उनि अगाडी बढ्दै छन् । सामान्य किसान परिवारमा हुर्किएका किरणलाई संगीत सिक्ने रहरले संघर्ष र अभावको बाटोमा लामै हिँडएका किरणलाई आजको दिनको पर्खाईमा थिए । आज तपाईहरुको हातमा छ ।